महालक्ष्मी विकास बैंकसहित ३ कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि तीन कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) महालक्ष्मी विकास बैंक, निर्धन उत्थान लघुवित्त र नेपाल हाइड्रो डेभलपरको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता महालक्ष्मीको ४७०.३३ रुपैयाँ, निर्धन उत्थानको १२००.७७ रुपैयाँ र नेपाल हाइड्रोको...
मूल्य समायोजनपछि एनसीसी बैंक, महुली र विजय लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि एनसीसी बैंक, महुली लघुवित्त र विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेप्सेले यी ३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्यमा समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता एनसीसी बैंकको २६३.४३ रुपैयाँ, महुली लघुवित्तको १५०२.३८ रुपैयाँ र विजय...
मूल्य समायोजनपछि बुटवल पावर र समृद्धि फाइनान्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले बुटवल पावर कम्पनी र समृद्धि फाइनान्सको सेयरमूल्यमा समायोजन गरेको छ। नेप्सेले लाभांश प्रयोजनका लागि बुटवल पावर र हकप्रद प्रयोजनका लागि समृद्धि फाइनान्सको सेयरमूल्यमा समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता बुटवलपावरको ४३८.७३ रुपैयाँ र समृद्धि फाइनान्सको ३६१.३३ रुपैयाँ कायम...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बोनस सेयरका लागि ३ कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले ज्योति विकास बैंक, एनएमबि लघुवित्त र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता ज्योति विकास बैंकको ४०३.१५ रुपैयाँ, एनएमबि लघुवित्तको १०५३.५० रुपैयाँ र सूर्या लाइफको ६३८.८६...
दुई वाणिज्य बैंकसहित चार कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कुनको कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि दुई वाणिज्य बैंकसहित चार कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले एनएमबि बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, गणपति लघुवित्त र छिमेक लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता एनएमबिको ३३६.३६ रुपैयाँ, नेपाल एसबीआईको ३४४.८३ रुपैयाँ, गणपतिको...
स्वावलम्बन लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले आज स्वावलम्बन लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ११००.८४ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता १३१० रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित...
मूल्य समायोजनपछि साना किसान विकास लघुवित्त र एचआईडीसीएलको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बोनस सेयरका लागि साना किसान विकास लघुवित्त र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता साना किसानको ११७६ रुपैयाँ र एचआईडीसीएलको २४८.३३ रुपैयाँ कायम गरेको छ।...
दुई वाणिज्य बैंकसहित तीन कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कसको कति ?
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बोनस सेयरका लागि दुई वाणिज्य बैंकसहित तीन कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले प्रभु बैंक, सनराइज बैंक र मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको सेयरमूल्यमा समायोजन गरेको हो। मूल्य समायोजनपछि प्रतिकित्ता प्रभुको २९४.७३ रुपैयाँ, सनराइजको २५४.१० रुपैयाँ र मनकामना स्मार्टको १३३३.३३...
मूल्य समायोजनपछि सपोर्ट, सूर्योदय र वोमी लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि ३ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सपोर्ट, सूर्योदय र वोमी लघुवित्त सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। सयमोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता सपोर्टको १७६९.२३ रुपैयाँ, सूर्योदयको १४२७.५० रुपैयाँ र वोमी लघुवित्तको १३४०.८३ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघिको...
लुम्बिनी विकास बैंकको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बोनस सेयरका लागि लुम्बिनी विकास बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले मूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता लुम्बिनी विकास बैंकको ४२९.६५ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता ४८५.५० रुपैयाँ रहेको थियो। अब यो बैंकको सेयर समायोजित मूल्यअनुसार नै...
मूल्य समायोजनपछि नेरुडे लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बोनस सेयरका लागि नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता नेरुडेको १०४१.१८ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता १२६४.९० रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नै नेरुडेको सेयर...
मूल्य समायोजपछि यी ३ कम्पनीका सेयरभाउ कति?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले तीन कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि लक्ष्मी बैंक र समता घरेलु लघुवित्त तथा हकप्रद सेयरका लागि नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता लक्ष्मी बैंकको २७०.३७ रुपैयाँ, समता घरेलु लघुवित्तको ११२५.८३...
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि स्वाभिमान लघुवित्त र आईसीएफसी फाइनान्सको सेयरमूल्यमा समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले बोनस सेयरका लागि स्वाभिमान लघुवित्त र आईसीएफसी फाइनान्सको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता स्वाभिमान लघुवित्त १९१९.८८ रुपैयाँ र आईसीएफसीको ६३९.८२ रुपैयाँ...
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित ‘ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना–१’ को आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि घोषित बम्पर प्रतिफलका इकाइमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले मूल्य समायोजन गर्दै प्रतिइकाइ १०.८८ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिइकाइ २०.८८ रुपैयाँ...
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्राइम बैंकको प्रतिकित्ता ३८१.९० रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो बैंकको प्रतिकित्ता ४४३ रुपैयाँ कायम भएको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नै यो बैंकको...